Waxa magaalda Toronto lagu soo gaba gabeeyay tartankii kubadda cagta ee la magac baxay North America Youth challenge Cup 2014.
Ciyaartii kama dambeynta "Final" ayaa waxaa isugu soo haray kooxda Hilac oo semi-finalka kasoo adkaatay Windsor iyo Downtown oo 3-0 kusoo martay Seif.
Ciyaartani finalka oo aad u xiiso badanay ayaa 3-1 ay guusha ku raacday kooxda Down town sidaan ku qaatay koobkii North America Youth challenge Cup 2014. Waxaa hambalyo iyo ku dayasho mudan tababaraha kooxda Down town Cumarey Baarba oo har iyo habeen garab taagan kooxdiisa oo looga bartay ciyaar wanaag.
Dhanka kale caruuta ay da'dooda ka hooseyso 12 jir ayaa iyagana koob loo dhigay.
Koobkani ayaa waxaa ku loolamay kooxda Semcy ee uu tababare u yahay Anwar Taibit iyo kooxda Xiddigaha ee u tababare u yahay Ahmed Bakari "Xamada".
Ciyaartooyda dhalinta yar ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo dadweynihii usoo daawashada tagay ay aad ugu riyaqeen.
Bilowgii ciyaarta ayaa waxaa gool aad u qurux badan ku hormatay kooxda Semcy. In ka yar 3 daqiiqo kadib ayaa Yasir uu kooxdiisa xiddigaha u dhaliyay goolkii bar bardhaca, isagoo kubadda si qurxoon uga dul qaaday goolhayaha Semcy.
Daqiiqadihii loogu talo galay ciyaarta ayaa labadan kooxood isla dhaafi waayey 1-1.
Intaa kadib ayaa labadan kooxood loo dhigay Rigooreyaal "Penalties" si midooda uu koobka ugu guuleysto.
Rigooreyaashan ayaa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Xiddigaha sidaana ku qaatay koobkii
North America U12 challenge Cup 2014.
Sidoo kale dhallinta cuslaatay ayaa iyaduna koob loo dhigay. Koobkani ayaa waxaa ku tartamay kooxda All Stars iyo xiddigaha.
Dhalinta cuslaatay ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar ay farsamadeedu aad u sareyso iyagoo caruurtii yaraa iyo dhallinyaradii halkaasi joogay cashar u dhigay.
Labadan kooxood oo isku awood ahaa, ayaa marba markii ay koox gool dhalisa mida kale ay iska soo gudeysay.
Markii ay ciyaartu ka harsaneyd 3 daqiio oo keliya ayaa All Stars ay 6-5 ku hogaaminayeen.
Odeyaasha xiddigah ayaa weerar aan kala go' laheen ku qaaday goolka All Stars iyagoo halkaasi 2 gool oo daran doori ah ka dhaliyay. Ciyaartani ayaa waxay ku dhamaatay 7-6 oo ay guusha ku raacday dhallinta cuslaatay ee Xiddigaha.
Guddomiyaha qaban qaabada tartankani Nuur Diini (Diinaye) wuxuu u mahdcelinayaa dadkii gacanta weyn ka geestay qaban qaabada tartankani gaar ahaan: Banadir Restaurant, Daba goye Restaurant, Hamadi Restaurant, Somali Candian Times, Shabakadda Xiddigaha, Cabdulqadir Nuuraye, Oday, Mursal, Faris iyo dhamaan ciyaartooydii kasoo qeybg gashay
FG: Dhamaan sawiradii iyo maqaalkani oo maqal iyo muuqaal ah filo goor dhow